Zingaki izifundo okufanele uziphase ukuze ungabuyisi umfundaze? | Ukwakheka nezifundo
Zingaki izifundo okufanele uziphase ukuze ungabuyisi umfundaze?
UMaite Nicuesa | 28/05/2021 23:03 | Scholarship
Lapho umfundi enza isicelo somfundaze, imvamisa bafunda izisekelo zale kholi ngokucophelela. Ngale ndlela, kuyethula imibhalo efanelekile ngaphakathi kwethemu enikezwe ukucubungula isicelo sakho. Uma zonke izinqubo sezenziwe, abafakizicelo kumele balinde ukushicilelwa kwesinqumo.
Ukuthola umfundaze akuhlinzeki kuphela ngenzuzo, ngoba lolu sizo lwezezimali lunikeza ukuxhasa ukuhlangabezana nezindleko zemfundo. Isibalo semifundaze asipheli, ngakho-ke, ukuthola usizo kusho nokuthi unesibopho.
1 Buyisa imali yokufunda uma ungathobeli umthetho
2 Zingaki izifundo okufanele uziphase ukuze ungabuyisi umfundaze we-MEC?
Buyisa imali yokufunda uma ungathobeli umthetho
Ukuzibophezela ekutadisheni kubalulekile ekuzuzeni izinhloso zemfundo yenkambo ngayinye. Izinhloso ezifreyimuwe kumongo wesifundo ngasinye. Kunombuzo abafundi abazibuza wona lapho befaka isicelo somfundaze. Zingaki izifundo okufanele uziphase ukuze ungabuyisi umfundaze? Lo ngumbuzo okufanele uthintwe ngawo ngendlela yomuntu uqobo, ngoba uhlobo ngalunye lwezifundo luhlukile futhi lunezimo ezihlukile. Ngale ndlela, funda izisekelo zekholi ukuze ube nemininingwane eningiliziwe maqondana nawo wonke amaphuzu afanayo. Futhi, nawe, ungaxhumana nebhizinisi elihlanganayo ukuxazulula noma imiphi imibuzo maqondana nalokhu.
Lo mbuzo ungabuzwa ngenye indlela. Umfundi kufanele adlulise inani lamakhredithi asunguliwe ukuze agcine umfundaze. Kufanele kuvezwe ukuthi umfundi ucela usizo futhi esifundweni esilandelayo. Kodwa-ke, ukuthi lolu sizo luyanikezwa yini kuzoya ngemiphumela yakho yezifundo.
Inhloso yesifundo senzelwe inhloso ethile. Njengoba isibalo sezibonelelo sinqunyelwe, futhi nenani lezicelo lingaba likhulu, kunohlelo olucacisa ukuthi obani abazohlomula kulezo zibonelelo. Bazoba yilabo abahlangabezana nemibandela ebekwe ezisekelweni. Noma kunjalo, Uma phakathi nezifundo umfundi ephula ngemibandela yezinye zale mibandela, uzowela ekungathobelini. Futhi, leli qiniso linemiphumela maqondana naleyo mfundo.
Zingaki izifundo okufanele uziphase ukuze ungabuyisi umfundaze we-MEC?
Isizathu sokuthi ibhizinisi elihlanganayo lingadinga ukuthi umfakisicelo abuyise umfundaze ukuthi lolu sizo alusetshenziswanga ngenhloso obekuhloselwe yona. Lokhu kuyinto engenzeka ezimeni nasezimeni ezahlukahlukene. I- Izifundo ze-MEC banikezwa nguMnyango Wezemfundo Nokuqeqeshwa Kwezobuciko. Inhloso enkulu yalezi zibonelelo ukukhuthaza ukusekelwa kwemfundo. Umuntu ozuza lo mfundaze kuzodingeka abuyise inani alitholile uma, ngokwesibonelo, eqhubeka nokukhansela ukubhaliswa esikhungweni semayunivesithi. Njengoba lesi sinqumo sikhomba ushintsho kuphrojekthi yakhe yempilo yokufunda.
Kepha futhi kungenzeka ukuthi, ngaphandle komzamo nesikhathi sokufunda, umfundi akakwazi ukudlulisa inani elidingekayo lezifundo ukuze angalubuyisi usizo. Umfundi kumele ngabe udlulise amaphesenti ama-50 wamakhredithi abhalise kuwo. Le datha icacisiwe ku-40% uma kukhulunywa ngemisebenzi yesayensi.
Lapho sekutholakele usizo lokwenza iphrojekthi ye-degree yokugcina, futhi ingazange yethulwe ngosuku oluhleliwe, umfundi kufanele futhi aqhubeke nokubuyisa imali ayitholile. Ukubuyiselwa kwemali kufanele futhi kwenziwe lapho kuthiwe usizo aluhambisani nomunye umfundaze owutholile.
Ngakho-ke, kubaluleke kakhulu ukuthi unake imininingwane etholakala ngezingcingo ezahlukahlukene zemifundaze ukucubungula isicelo. Kepha kubalulekile ukuthi ufunde imibandela ethintekayo ekwamukeleni umfundaze.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukwakheka nezifundo » IYunivesithi » Scholarship » Zingaki izifundo okufanele uziphase ukuze ungabuyisi umfundaze?
Uyini umncintiswano wokudlulisa?